Fikarohana momba ny firaisana Tranom-pitaovam-pirahalahiana avy amin'i Hiram Sibley | Eric Schmidt - Fikarohana momba ny vatana teraka
Eric Schmidt dia injeniera rindrambaiko sy mpandraharaha izay efa talen'ny Google sy ny filohan'ny mpanatanteraka mpanatanteraka ny Google. Tao anatin'izany andraikitra izany dia nanampy tamin'ny fanovana ny fomba fiasan'ny fiarahamonina ny vaovao. Na dia mailaka aza ny programa mailaka, Google dia manome fiara mifampiresaka amin'ny olona an-tapitrisany.
Tao anatin'ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson, nanontany an'i Ahtun Re aho, ilay fitarihana fanahy na tari-dàlana avy amin'i Kevin izay naneho ny fahaiza-manaon'izy ireo hahafantarana tsara ny fiainany taloha, izay nahatonga an'i Eric Schmidt ho tafiditra indray.
Ahtun Re nilaza tamiko fa i Eric dia iray amin'ireo mpanorina ny orinasa Tandrefan'ny Tandrefan'ny Tandrefana, izay nanampy tamin'ny fanovana ny fomba fampitana vaovao tamin'ny taonjato 19. Nandritra ny fotoam-pivoriana nataoko, ireo mpanorina ny Googled Western Union ary niaraka tamin'i Ahtun Re teny an-tariby, rehefa avy nanadihady ireo kandida mety, i Ahtun Re dia nanamafy fa i Eric Schmidt dia i Hiram Sibley nandritra ny fiainany taloha. Sibley dia orinasa indostrialy, mpandraharaha ary izy no filoha voalohan'ny Telegrafa Western Union. Taorian'ny nahombiazany sy ny harena, toa an'i Eric Schmidt, i Sibley dia lasa mpanao asa soa.
Ny mahaliana, Hiram Sibley dia tia mozika ary nanohana ny famoronana ny Sekolin'i Eastman Music of the University of Minnesota izy. Ny Tranomboky Music Music Library (Sibley Music) no sehatry ny mozika an-dalamby lehibe indrindra any Etazonia. Mahatsiaro ho an'ny mozika ihany koa i Eric Schmidt, fony izy namindra ny piano Concerto Chau-Giang Nguyen.
Ny sarin'i Hiram Sibley dia omena etsy ambony sy eo ankavia, raha ny sary etsy ambony etsy ankavanana kosa ny sarin'i Eric Schmidt. Sary nohavaozina mba ahafahana mankasitraka kokoa ny fitoviana amin'ny rafitra na taolam-boalavo.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny fisehoana ara-batana dia mamaritra ny maodelin'ny angovo fanahy, miaraka amin'ny antony lova na lova. Na dia tsy mampitolagaga aza ny fitoviana ara-batana amin'ity tranga ity, dia azo atao ny mankasitraka ny fitoviana amin'ny rafitry ny taolana.
Ny fiainana taloha talenta: Hiram Sibley sy Eric Schmidt dia nanjary mpanankarena mpanankarena izay nanatsara ny teknolojia farany teo amin'ny elany. Raha nanampy tamin'ny fametrahana ny telegraph sy ny Internet, Sibley sy Schmidt dia namadika ny fomba fampitana ny vaovao amin'ny vanim-potoany. Taorian'ny nanan-karena, nanjary mpandraharaha filamatra i Sibley sy Schmidt.